Mavhiri Anotakura, Mberi Ende Vanotakudza, Vanowirirana Vhiri Vanovhara - Jufenglong
mon - fri: 10am - 7pmakagara - zuva: 10am - 3pm
Yakashata Terrain Forklift
Kuzvigadzirira Konkrete Sanganisa
iri bhizinesi rinogadzira kugadzirwa kwevatakuri uye yekuzvipa-yavo yekusanganisa marori.
LEHMAN rinorema rinotakura zvinhu zvakateedzana, zvese zvepamba uye zvepasi rese zvakanakisa zvinowirirana, mhando yakavimbika, inosangana nezvinodiwa zvevanhu, yakagadzira mahofisi munyika dzinopfuura gumi pasirese, uye zvigadzirwa zvawo zvinotumirwa kune dzinopfuura nyika makumi maviri nematunhu akadai seIndia. , lran, Russia, Libya, Vietnam, Tanzania, South Africa, Ethiopia neBrazil.
Iyo kambani ine yakasimba yakazara simba, inosanganisa chigadzirwa kutsvagisa nekusimudzira, kugadzirwa, kutengesa uye sevhisi, uye inotungamira mukuwana yakakosha michina yekugadzira uye yekugadzira marezinesi kuburikidza eu CE certificatin, ISO9001 internatinal mhando system chitupa
Kuzvidzora kurodha musanganisi rori
Ichi chigadzirwa chinogona kutsiva seti jenareta, maLader, masanganisi uye matangi. Zvakare nevashandi vanopfuura vatanhatu, chizvarwa chitsva chemabhizimusi ekuvaka anotungamira zvigadzirwa. Iyo tangi inogona kutenderedzwa pamadhigirii mazana maviri negumi pasina magumo akafa kumativi matatu.
Yasimbiswa furemu, iyo nzvimbo yekuparadzira giravhiti inonzwisisika, yakasimba kutakura kugona.
kutengeserana kunze kwenyika
zvigadzirwa zviri aivigirwa kunyika dzinopfuura makumi maviri uye kumatunhu akadai India, lran, Russia, Libya, Vietnam, Tanzania, South Africa, Ethiopia uye Brazil.
Robhoti otomatiki Welding michina yekuona mhando yeiyo waya, weld yakachena yunifomu, solid Welding.
iyo kambani yakaunza chiGerman Chizere otomatiki Laser Kucheka uye yekuvharisa michina uye yeGerman CNC yekutengesa marobhoti michina.
Yega Yekuisa Konkrete Masanganiswa ayo anogona ...
26 Mbudzi, 20
Yega Yega Yekusanganisa Concrete Masanganiswa ayo asingakwanise kurambwa Mumakore achangopfuura emapurojekiti einjiniya, iyo Yega Inotakura Konkrete Mixersr iri kuramba ichikwira nekukwirisa. Kunyangwe mumaguta, mumataundi, kana mu ...
Unoziva here iwo matanhatu matipi ekuti uve wakanaka ...
Anogadzirira Front End Loader opareta anogona kunyatsoziva mashandisiro emuchina kana uchityaira anoisa, kudzora kupfeka kwemuchina, kudzikisa kushandiswa kwemafuta, uye kupedzisa basa nekukurumidza uye mushe. Izvo zvinotevera ...
Kune vanopfuura makumi masere nepakati uye vakuru vehunyanzvi vashandi muindastiri, vashandi vanopfuura mazana manomwe, uye rakasimba timu yesainzi timu yakave nechokwadi chekambani yakazvimirira kutsvagisa nekusimudzira, kunyanya kwenguva refu-mushandirapamwe wth yunivhesiti clleges uye universitieThus, yepamusoro-soro bhizinesi timu yakavakwa.
Tora FOMU YEKUTAURA
Innovation inoshandura izwi, mhando inogadzira iro ramangwana! Shan Yi michina LTD, iri Laizhou, Shandong dunhu, rakaumbwa muna 1990s S. The kambani ndokwenguva nzvimbo 4000 sqm uye ane Modem kugadzirwa workshop pamusoro 20000 sqm pamwe zvachose inivhesitimendi 200000000 Currencykuva, chinhu zvebhizimisi kushandisa kugadzirwa kwemalader uye yekuzvipa-wega masanganiswa emarori. Inogadzira 50000 vanoremedza uye 8000 yekuzvidyisa-wega chisanganiso marori
Shanyi Lehman Chigadzirwa Zvimiro
Kuzvichengetera-Iwe Sanganisa Musori Rori, Simende Musanganisi Kudira Kongiri, 2021d Wheel Loader, Yakabatana Wheel Loader, Nyika Dzakakura Kupfuura Pamberi End Loader, Bell Wheel Loader,
Kero: Shahe Industrial Park, Laizhou Guta, Shandong Province